डराएका पो हुन् कि मेगास्टार ? - Sutra TV - Digital News Portal Sutra TV
नेपालमा कुनै अभिनेताको स्टारडममा विश्वाश गर्न सकिन्छ त, अभिनेता अनमोल केसीको । ‘होस्टल’ डेब्यु अभिनेता केसीले ‘ए मेरो हजुर ३’ सम्म आईपुग्दा कुनै फ्लपको सामना गर्नु परेन । उत्कृष्ट ब्यानर र उत्कृष्ट टिमसँग काम गर्दै आएका अनमोल चलचित्र छान्नमा पनि सफल देखिएका छन् । उनको पछिल्लो चलचित्र ‘ए मेरो हजुर ३’ उनको करियरको नै उत्कृष्ट ब्यापार गर्न सफल चलचित्र बन्यो । यस्ले अनमोललाई फाईदा त पक्कै भयो सँगै चुनौती पनि थपिदियो । ‘ए मेरो हजुर ३’ पछि अनमोलको चलचित्र कुन होला त ? यो स्वयम अनमोलले पनि निर्णय गर्न सकेका छैनन् ।
केही समय अगाडि अनमोलले निर्देशक साम्तेन भुटियाको चलचित्र ‘धुपौरे’ गर्ने पक्का भएको थियो । अनमोलले वर्कशप पनि गरिरहेका थिए अनी लोकेसन हेर्न समेत गएका थिए । चलचित्रका लागि उनी तयार हुँदै थिए । तर, खबर बाहिरियो कि अनमोलले चलचित्र छाडे भनेर । हुन त यस् बिषयमा अधिकारिक केही निर्णय सार्वजनिक भएको त छैन तर, अनमोल अब यो चलचित्रमा काम नगर्ने मुडमा रहेको सुनिएको छ । निर्माण टिमले गरेको हतारोका कारण अनमोलले चलचित्रबाट हात झिक्न परेको खबर छ । के साच्चै अनमोलले चलचित्र छाड्नुको कारण यहीं हो त ? स्क्रिप्ट मन पराएर चलचित्रसँग जोडीएका अनमोलले निर्माण पक्षसँग केही समय त माग्न सक्थे होला नि । चलचित्रका अभिनेतालाई चाहिदो वर्कशप पनि नगराई चलचित्रलाई फ्लोरमा लान लाई किन हतारो पर्या होला त टिमलाई ? कि चलचित्र टिमलाई मेगास्टारले चलचित्रको तयारीको लागि प्रसस्तै समय लिने गरेको कुराको ज्ञान थिएन ? हलिउड बलिउड तिर त एउटै चलचित्रका लागि वर्षौ तयारी गरेको देखिन्छ तर नेपालमा भने अनुबन्धित भए लगत्तै सुटिङको चटारो । अनी हतारमा गरेको कामले फुर्सदमा पछुताउनु सिवाय केही विकल्प रहन्न । सायद मेगास्टारलाई पनि पछि पछुताउनु पो पर्छ कि भन्ने लागेको होला कि ।
खैर, डेब्यु देखी तारन्तार हिट चलचित्र दिईरहेका अनमोलले ‘धुपौरे’ नगरे पनि उनको होम प्रोडक्सनको चलचित्र ‘एन्टी हिरो’ त पक्का छ । तर, ‘एन्टी हिरो’को स्क्रिप्ट तयार नभएका कारण उनले अन्य चलचित्रमा काम गर्न सक्ने सम्भावना छ । ‘धुपौरे’ छोडेको खबर सँगै उनलाई चलचित्रको अफर प्रसस्तै भईरहेको छ । धेरै निर्माता निर्देशक उनी सँग सहकार्य गर्ने प्रयासमा छन् । तर, अनमोलले अब को सँग गर्लान त सहकार्य ? ‘धुपौरे’ छाड्नुको वास्तविक कारण के हो त ? कि अनमोल चलचित्र छान्न डराएका हुन् ? हिट अनमोललाई दर्शकमाझ हिट चलचित्र नै दिन पर्ने दबाब त छ नै तर, कर्म गर फलको आश नराख भनेर कसैले मेगास्टारलाई सम्झाइदिने कि ?